Thwebula Vuze 1.9.1 – Android – Vessoft
Le software adingekayo Java ukugijima kahle
Vuze – a isofthiwe ukulanda amafayela sesifufula lobehlukene. Isofthiwe iqukethe lula search engine eyenza ukucinga amafayela sesifufula usebenzisa isitoreji wendawo futhi isiphequluli. Vuze ikuvumela ukuba ulungise umkhawulo ijubane thwebula kanye layisha, ukulanda amafayela umuntu ukusatshalaliswa, ukusungula isaziso emva thwebula kokuphothulwa. Futhi software isekela automatical ifayela thwebula ngenkathi yokuxhuma kwinethiwekhi WiFi. Vuze ibusa okungenani uhlelo imithombo futhi i kulula ukusebenzisa interface.
Search Easy of amafayela sesifufula
Ulungisa ijubane thwebula
A neqoqo elikhulu izici
The ukulayisha sakugcina ohlelweni
Amazwana on Vuze:
Vuze Ahlobene software:
Sesifufula Zokuham video Isofthiwe ukulanda noma ukubuka amabhayisikobho kanye uchungechunge izinhlobonhlobo ezihlukene online. Isofthiwe amathuluzi anhlobonhlobo i ukusetshenziswa lula of service.
Zokuham video Sesifufula Isofthiwe ukubuka amabhayisikobho nezinhlelo ze-TV online in kwencazelo high. Isofthiwe kwenza ukulanda okuqukethwe kwabezindaba ngesivinini.
Amafayela The popular USB ifu ukushintshanisa futhi sisebenze amafayela ezinhlobo ezehlukene. Futhi isofthiwe kwenza ukunikeza i ukufinyelela amafayela kuma abanye abasebenzisi for the edit collective.
English, Afrikaans, Français, Español... ColorNote 3.10.6
Umbhalo abahleli The notebook electronic ukwakha amanothi ahlukene nezikhumbuzo kanye okukhethwa kukho usuqonda by imibala ehlukene kanye nezigaba.
English, Français, Español, Deutsch... Humble Bundle 2.1.2
Imidlalo Isofthiwe ukulanda imidlalo uthenge ngokusebenzisa isevisi ethandwa. Isofthiwe inikeza ithuba lokubona izinhlu okuqukethwe uthenge futhi ubuyekeze uma kunesidingo.
Internet Isofthiwe ukuqapha ukusetshenziswa kwedatha yeselula. Isofthiwe futhi ubonisa inani traffic esebenziswe izinhlelo zokusebenza ezahlukene phakathi nenkathi ethile yesikhathi.
Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ukusakaza ividiyo ukusakaza inethiwekhi kusuka kudivayisi yakho ikhamera noma upheqa nezinye ukusakazwa emhlabeni jikelele.
Amamephu Isicelo nge inqwaba izincomo kanye nokubuyekezwa lezihambi sokuhlelwa travel emhlabeni wonke. Isofthiwe inikeza ulwazi mayelana uhlobo wezokuThutha ukuba kuhanjwe iholidi.
-Internet Isiphequluli Fast and evikelekile ngokusekelwa technologies zanamuhla. Isofthiwe imodi engaziwa ukuvimbela wokusindisa umlando website zibhekwa.
English, Українська, Français, Español... Clash of Clans 8.551.24
English, Українська, Français, Español... Mozilla Firefox 49.0.2